संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीचको पार्टी एकताको घोषणा आज, एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीचको पार्टी एकताको घोषणा आज, एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ – Akhabar Nepal
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीचको पार्टी एकताको घोषणा आज, एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’
२०७६, २३ बैशाख सोमबार ०८:०५
कमाठमाडौं: संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीचको पार्टी एकता घोषणा आज हुने भएको छ । एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ हुनेछ । डा. बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद् र उपेन्द्र यादव केन्द्रीय समितिको अध्यक्षता गर्ने सहमति जुटेको छ ।
सहमतिमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका भट्टराई र फोरम नेपालका यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले तत्कालै सरकार नछाड्ने भएपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग एकीकरणको घोषणासँगै यादवले तत्काल सरकारभित्रै रहेर संघर्ष गर्न रणनीति लिएको छ । फोरम र नयाँ शक्तिका नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार संसदको चालु अधिवेशनसम्म उपेन्द्र यादव सरकारमै रहनेछन् ।
आज घोषणा हुन लागेको समाजवादी पार्टीको घोषणा कार्यक्रमबाट नेताहरुले सरकारलाई चेतावनी दिनेछन् । उक्त मञ्चबाटै प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिने तयारी रहेको छ । पार्टीको पदाधिकारीमा फोरमका १६ र नयाँ शक्तिको हेडक्वाटरमा रहेका ९ जना गरी २५ सदस्यीय हुनेछ । केन्द्रीय सदस्य नयाँ शक्तिको १ सय ५१ र फोरमका दुई सय बढी हुनेछ भने संघीय परिषदमा एक हजार बढी सदस्य हुनेछन् । जिल्ला संरचना पनि दुबै पार्टीले मिलानेछ ।